Vaovao - Fiasan'ny gasket lohan'ny varingarina sy fitaovana
Manana fanontaniana? Antsoy izahay:0086-18831941129
Gasket Set feno
Gasket an'ny lohan'ny varingarina
Gas Pan Gasket
Fiasan'ny gasket lohan'ny varingarina sy ny fitaovana
Ny lozabe an-doha dia singa iray tena ilaina ao anatin'ny motera mora may. Ny gasket an-doha dia miantoka ny tsindry namboarina avy amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alikaola momba ny etona solika ao anatin'ny efitrano fandoroana. Ny efitrano fandoroana dia misy ny piston ary mila tsindry avo lenta mba hahazoana antoka fa hitifitra tsara ireo piston. Ankoatr'izay, ny solika sy ny coolant dia manana asa lehibe mitovy, fa kosa, raha te hahavita tsara ny asany dia tsy afaka mifangaro izy ireo. Ny lozabe an-doha dia mitazona ny efi-trano hisarahana mba hiantohana fa tsy misy fandotoana rano mifangaro.
Ny fiasan'ny gasket varingarina misy motera dia: tombo-kase, izay singa famehezana elastika napetraka eo anelanelan'ny sisin'ny varingarina sy ny lohan'ny varingarina. Satria tsy azo atao ny fisaka tanteraka eo anelanelan'ny sisin'ny varingarina sy ny lohan'ny varingarina, ilaina ny gasket lohan'ny varingarina hisorohana ny gazy avo lenta, ny menaka manosotra ary ny rano mangatsiaka tsy hivoaka eo anelanelan'izy ireo.
Ireo fitaovana gasket lohan'ny varingarina dia mizara roa amin'ny ankapobeny:
(1) Mampiasa asbestos toy ny matrix ny tsipika asbestos metaly ary afangaro amin'ny hoditra varahina na vy. Ny sasany mampiasa tariby vy na lovia vy mihorona ho toy ny taolam-paty, ary ny sasany manampy peratra vy manodidina ny lavaka varingarina mba hampitomboana ny tanjaka. Ny tombony dia ny vidiny ambany, fa ny tanjaka kosa ambany. Satria ny asbestos dia misy fiatraikany eo amin'ny vatan'olombelona, ​​dia natsahatra izany tany amin'ny firenena mandroso.
(2) Ny gasket metaly dia vita amin'ny takelaka vy milamina tokana, ary misy tendrony elastika eo amin'ny tombo-kase, izay fehezin'ny elastika ao amin'ireo tendrony sy ny asan'ny tombo-kase mahatohitra hafanana. Efa be mpampiasa any ivelany. Ny tombony dia ny tanjaka avo, ny tombo-kase tombo-kase tsara, fa ny lafo kosa.
Ny fanoloana gasket loha dia tsy zavatra azonao atao amin'ny garazy. Aza mety hofitahina amin'ny fahatsoran'ny gasket an-doha satria mila manala ny faritra rehetra amin'ny motera ianao hahatratrarana azy. Ny tsara indrindra dia ny mamela ity asa ity ho an'ny matihanina. Ny sisa tavela dia andraikitra amin'ny fandraisana andraikitra alohan'ny zava-dratsy mitranga. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fisorohana ny vidin'ny loha kapoaka ary ny vidin'ny fanamboarana lohan-doha dia azo atao amin'ny alàlan'ny serivisy mahazatra ny rafitra fampangatsiahana. Raha jerena ny vidin'ny sisin'ny rafitra mangatsiaka, dia fahendrena ny manolo azy ireo raha ilaina izany avy eo mandoa dolara an'arivony ho an'ny fanamboarana lehibe.
Fotoana fandefasana: Mar-08-2021
Fahamarinana sy fahatokisana, Vidiny mialoha ary mpanjifa aloha
Fiasan'ny gasket lohan'ny varingarina sy ny vady ...
© Copyright - 2020-2021: Voatahiry ny zonao rehetra. Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile